Taxaabistaydii Iyo Tacaddigii Aan Arkay: Bilawgii Dhegaysiga Dacwadda. Qaybta 7aad | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
14kii September 2016ka maalin Arbaca ah ayaa mar kale la ii qaaday Maxkmadda, waxaana subaxnimadaas xafiiska joogay Garsoore Yaxye Xuseen Yuusuf. Waxa uu ii ballan-qaaday in dhakhso loo bilaabi doono dhegaysiga dacwadda la ii haysto, waxa uu intaas raaciyay in xafiiska xeer-ilaalinta la keenay gal-dacwadeedkaygii, isla markaana aanu hubin in qof lagu qoray. “Farxaan Mire Cismaan ayaa oogista dacwadda ku qoran” ayaan idhi.
Dhambaalladani ma ay noqonnin kuwo noo cuntama oo aanu sinaba u liqi karno, cid kastana waxa aanu hor dhignay “Heshiisku iyo dammaanaddu dhib malaha. Horta yuu u xidhnaa? Yaa taxaabistiisa ka dambaysay?Cidda uu wax ka tirsanayaa, miyaa ay daw-bixin diyaar u tahay?”. Inkasta oo ay dhexdhexaadintan qabyada ah si toos ah ama si dadban u galeen masuuliyiin dawladda xilal ka haya, cuqaal, ganacsato iyo odayaal tol ahi, waxa ay noqotay hal bacaad lagu lisay. Arrinkina waxa uu isugu biyo-shubtay in sharciga lagu kala baxo.
Waa ay adagtahay in maxbuus dawladdu haysataa ku dhiirrado maxkamadda, laakiin waxa aan lahaa“Calool-adayg waa Alle wehelkii”. Iska bax iyo iska gal, waxa ka wanaagsan inaad maxkamad ku qaabbisho ragga dhuumaalaysiga ciyaaraya, ee dhagarta kuu maleegay.
24kii September 2016ka, maalin Sabti ah ayaa la ii qaaday maxkamadda Gobolka Maroodijeex, si loo bilaabo dhegaysiga dacwadda la igu eedeeyay. Subaxnimadaas waxa goobjoog ahaa Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen, Suxufi Cabdicasiis Bashiir Nuur (Aasaasaha Mareegta www.xogreebnews), qoyskayga iyo saaxiibbo kale. Kolkii aanu galnay xafiiska Garsoore Khaalid Cabdi Shiil ayaa uu yidhi “Dad badan oo qoyska ah ayaa diyaar u ah in ay dhegaystaan dacwadda, waxa aynu tegaynnaa Hoolka Maxkmadda Rafcaanka”.